11 Koorsooyin Xisaab Lacag La'aan ah oo Dugsi Dhexe ah 2022
2022 Deeqaha Caalamiga ah iyo Kuwa Maxaliga ah | Baro Fursadaha Dibada | Deeqaha Waxbarashada iyo Lacagta |
Koorsooyinka Free Online
Barashada Kanada | Gelitaan | Deeqaha waxbarasho | Khidmadaha | Deeqo iyo Deymo
Australiya deeq waxbarasho
Deeqda waxbarasho ee Ghana
Xayeysiinta iyo Qoraalada La Isboonsariyay
Koorsooyinka Xisaabta ee Bilaashka ah ee Dugsiga Dhexe ee 11
Halkan waxaa ah koorsooyin xisaab online ah oo bilaash ah oo loogu talagalay ardayda dugsiga dhexe ee adduunka oo dhan oo aan joogno Study Abroad Nations waxay awoodeen in ay ka helaan intarneedka markii ay cilmi-baaris ku sameeyeen oo ay isugu geeyeen si sahlan.
Koorsooyinkan xisaabta waxaa loogu talagalay inay ka caawiyaan carruurta dugsiga dhexe inay si fudud u fahmaan isleegyo xisaabeed oo adag una diyaariyaan koorsooyin heer jaamacadeed iyo heer jaamacadeed ah.
Ereyga "dugsiga dhexe" waxaa loola jeedaa waxyaabo kala duwan waddamo kala duwan. Gudaha Boqortooyada Midowday (UK), dugsiga dhexe waa iskuul loogu talagalay carruurta da'doodu udhaxeyso 9 ilaa 13 sano jir. Intii lagu jiray Mareykanka iyo Kanada, waa dugsi sare oo yar.
Wax kastoo macnaheedu yahay waddan kasta, boostadani wali way shaqeysaa si fiican ka dib markii dhammaan noocyada xisaabta lagu bixiyo iskuulada adduunka oo dhan. Taasi waa sax, xisaabtu waa isku mid meel kasta habka loo maro wuu ka duwanaan karaa laakiin wali wuxuu sharaxayaa isla wax.
Hadda, qodobkan waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo carruurta dugsiga dhexe adduunka oo dhan xagga xisaabta. Waxaa laga yaabaa in hal sabab ama mid kaleba, ilmahaagu uusan dhigan iskuulka caadiga ah ama aad rabto in ilmahaaga guri lagu dhigto, tani si fiican ayey u shaqeysaa.
Sidoo kale waxay noqon kartaa in ilmahaagu runtii jecel yahay xisaabta oo uu doonayo inuu sii wato barashada inta uu guriga joogo, markaa tani sidoo kale way fiicantahay. Waa inaad tustaa qoraalkan si ay u arki karaan koorsooyinka kala duwan ee xisaabta internetka oo si gaar ah loogu talagalay iyaga isla markaana bilaabaan barashada isla markiiba.
Xusuusnow in koorsooyinka xisaabta ee ku xusan qodobkan ay yihiin ardayda dugsiga dhexe, laakiin sidoo kale way ku anfaci kartaa haddii aad tahay qof weyn oo iloobey sida aljebrada dugsiga dhexe ama kalkulasku u shaqeeyo oo aad u rabto inaad dib ula soo noqoto aqoonta.
Waxaad sidoo kale kudarsan kartaa fasalada adiga oo qaangaar ah si aad ubadkaaga wax u barto hadhow ama aad uga caawiso shaqada guriga.
Maxay Tahay Maxaa Loogu Baranayaa Xisaabta Khadka Tooska ah?
Halkeen ka baran karaa xisaabta khadka tooska ah?
Waa maxay bogga ugu fiican ee lagu barto xisaabta?
Koorsooyinka Xisaabta ee Bilaashka ah ee Dugsiga Dhexe
Dugsiga Sare Precalculus: Caawimaad iyo Dib-u-eegis
Tirakoobka 101: Mabaadi'da tirakoobka
Xisaab 101: Kuleejka Algebra
Xisaabta Fasalka 6aad - 8aad: Tababbarka & Dib u eegista
Gabagabada Koorsooyinka Xisaabta Bilaashka ah ee Dugsiga Dhexe
Carruurta maalmahan way sii caqli badan yihiin daqiiqad kasta waxayna aqoontooda inteeda badan ka helaan internetka. Internetku waa goob aad u firfircoon oo lagu noolaado oo labadeenaba waxaan ognahay sida ay caruurtu ugu raaxaystaan ​​waaya-aragnimada nool, midna sida internet-ka oo aan laga dhaafin.
Barashada xisaabta gudiga fasalka runti waa caajis - ilmo kasta wuu igu raaci lahaa kan - laakiin waxba kuma caajiso khadka tooska ah, xitaa barashada aljabra ama kalkulaska internetka ma noqon doono. Marka, khadkaan soo socda ayaa ah in carruurta la siiyo khibrad waxbarasho oo cusub marka laga reebo kan ay had iyo jeer u barteen.
Sidoo kale, barashada qadka waxay ku imaaneysaa faa iidooyin badan oo iskuulka caadiga ah ama "qad la'aanta" uusan sameynin. Barashada khadka tooska ah waa mid dabacsan, ku habboon, ka raqiisan - bilaash xaaladaha qaarkood -, si dhakhso leh loo dhammaystiro, walina waxay bixisaa waxbarasho isku mid ah oo tayo leh sida iskuulka qadka ka baxsan.
Koorsooyinka, barnaamijyada, maaddooyinka waxaa bixiya qaar ka mid ah macallimiinta ugu sarreeya, macallimiinta, iyo macallimiinta adduunka. Koorsooyinka qaarkood ee khadka tooska ah, Maamulayaasha guud ee hay'adaha sare waxay ardayda siiyaan casharo bilaash ah oo laxiriira qaybaha kaladuwan ee waxbarashada waxayna siiyaan iyaga talooyin wax ku ool ah nolosha dugsiga kadib.
Waxaan at Study Abroad Nations waxay daabaceen qoraalo kala duwan oo ku saabsan koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah - dadka waaweyn markan - waxaana go'aansanay inaan midkan u keeno carruurta. Hadda, iyada oo loo marayo boostadan carruurta meel kasta oo adduunka ka mid ah oo wata taleefan casriga ah, tablet-ka, PC, ama desktop iyo xiriirka internetka ayaa iska diiwaan gelin kara koorsooyinka xisaabta ee bilaashka ah ee dugsiga dhexe lacag la'aan.
Waxaa jira barnaamijyo waxbarasho oo kala duwan oo internetka ah oo aad xisaabta uga baran karto khadka tooska ah ee bilaashka ah, Mathplanet waa mid ka mid ah barnaamijyada internetka ee bixiya xisaabta bilaashka ah ee internetka. In kasta oo ay jiraan kuwa kale oo aad la kulmi doonto intaad sii wadid akhriska qoraalkan.
Agabyadan internetka ayaa bixiya koorsooyin xisaab dhexe oo bilaash ah oo dugsiga dhexe ah oo ah pre-algebra, algebra 1, algebra 2, calculus, joomatari iyo qaar xitaa sii wada inay bixiyaan imtixaanno tababar oo SAT iyo ACT ah.
Kuwa soo socdaa waa qaar ka mid ah websaydhada ugu wanaagsan ee aad xisaabta uga baran karto khadka tooska ah ee bilaashka ah ama lacag la’aan ah;
Farshaxanka Dhibaatada Xallinta
Marka hore xisaabta
Websaydhkan waxaa si gaar ah ugu taliyay macallimiinta dugsiga sare waxaana loo arkaa inay yihiin kuwa ugu fiican barashada xisaabta khadka tooska ah.
Laakiin si aad wax uga ogaato koorsooyinka xisaabta ee internetka ee bilaashka ah ee dugsiga dhexe markaa waa inaad horey u sii socotaa sida ay hoos ugu qoran yihiin.
Kuwa soo socdaa waa 11 koorsooyin xisaabeed oo bilaash ah oo loogu talagalay dugsiga dhexe si loogu qoro waqti kasta;
Adiga oo ah arday dhigta dugsiga dhexe, waxaad u baahan tahay inaad isu diyaariso dugsiga sare, waad qaadan kartaa koorsadan xisaabta, Pre-Algebra, si taas loo gaadho. U isticmaal inaad tijaabiso biyaha kahor intaadan u gudbin waxa dhabta ah.
Koorsadan waxaa bixiya MathPlanet, waa 100% khadka tooska ah iyo sidoo kale bilaash. Koorsadu waxay u qaybsan tahay 10 cutub iyada oo cutub kasta u qaybsan yahay dhowr cashar. Cutubyada waxaa ka mid ah hordhac ku saabsan aljabrada, garaafka iyo shaqooyinka, aagga iyo mugga, isleegyada iyo sinnaan la'aanta, afarta qawaaniin ee xisaabta, iyo in ka badan.
MathPlanet ayaa kaa caawin doonta inaad kugu hagto heerarka ugu horreeya ee aljabrada dugsiga sare illaa koorsadan, ka faa'iideysiga fursadda oo hadda iska qor.
Koorsadan, Aljabra 1, waa mid ka mid ah koorsooyinka xisaabta ee internetka ee bilaashka ah ee loogu talagalay dugsiga dhexe waana koorso u diyaargarowga dugsiga sare ah oo kugu hagi doona adiga shaqooyinka, polynomials, sinnaan la'aanta, nidaamyada isleegyada, muujinta, muujinta xagjirnimada iyo caqliga, iyo kuwa kale.
Koorsadu waxay leedahay 12 cutub cutub walbana wuxuu markaa u qaybsamaa dhowr cashar oo midkasta leeyahay aragtiyo, casharo fiidiyow ah, iyo tusaalooyin si uu kuu siiyo khibrada waxbarasho ee ugu fiican.
Kani waa koorso kale "tijaabin biyo ah" oo loogu talagalay diyaarinta ardayda dugsiga dhexe ee dugsiga sare. Koorsada, Aljabra 2, waa mid ka mid ah koorsooyinka xisaabta internetka ee bilaashka ah ee loogu talagalay dugsiga dhexe waxayna ku bari doontaa shaqooyinka isku-dhafan, jaantusyada, jaantusyada iyo sinnaan la'aanta, itimaalka iyo trigonometry, muujinta jibbaarada iyo muujinta logarithmic iyo kuwa kale.
Si laguu siiyo khibrad baris aad u fiican, koorsada waxaa loo qaybin doonaa 13 cutub oo leh aragtiyo, tusaalooyin, iyo casharro fiidiyoow ah.
Koorsada joomatari waxay leedahay 10 cutub oo loo qaybiyay casharo kala duwan oo leh aragtiyo, casharro fiidiyow ah, iyo tusaalooyin. Casharradan ayaa kugu hagi doona maadooyin xisaabeed kala duwan oo ay ka mid yihiin wareegyo iyo aagag, xarriiqyo isbarbar socda iyo saddexagallo, isbeddello iyo afar geesoodleyaal, trigonometry, iwm.
Koorsada, Joometri, waa mid ka mid ah koorsooyinka xisaabeed ee bilaashka ah ee dugsiga dhexe loogu diyaariyo ardayda joomatari dugsiga sare.
The dugsiga sare precalculus waa mid ka mid ah koorsooyinka xisaabta tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay ardayda dhigata dugsiga dhexe ee xiisaha u leh xisaabta Koorsadani waxay u diyaarineysaa ardayga dugsiga dhexe xisaabinta dugsiga sare. Koorsadu waxay leedahay 32 cutub oo loo qaybiyay casharo kala duwan oo leh casharo fiidiyoow ah iyo tijaabooyin tijaabo ah.
Waxaad sidoo kale qaadan kartaa koorsadan haddii aad dhigato dugsiga sare sidoo kale maadaama ay ku siiso caawimaad iyo dib u eegis ku saabsan mowduucyada kala duwan oo ay ka mid yihiin howlaha polynomial iyo garaafyada trigonometric, noocyada aljebra iyo garaafyada iskudhafka, iwm.
Statistics waa mid ka mid ah koorsooyinka xisaabta internetka ee bilaashka ah ee ardayda dugsiga dhexe waxaadna ku heli kartaa aqoonta adoo iska diiwaangelinaya koorsada. Istaatistikadu waa laan xisaabeed oo kahadleysa falanqaynta iyo aruurinta xogta waana mid faa iido u leh helitaanka isbedelada iyo go'aan qaadashada.
Mawduucyada waxaa ka mid ah falanqaynta xasaasiga ah, qaybinta, falanqaynta dib u dhaca, iyo tijaabinta mala-awaalka.
Dhibaato kasta oo xagga xisaabta ah ama mowduuc walwal ka leh masaafada, xaglaha, ama hirarka, trigonometry wuxuu kaa caawinayaa inaad fahamto. Haddii aadan weli fahmin trigonometry ama dhibaato kaa haysato fahamka mowduucyada qaarkood waa inaad fahamtaa iska qor koorsadan oo wax ku baro adoo adeegsanaya casharo fiidiyoow ah.
Koorsadu waxay ka kooban tahay mawduucyo kala duwan oo ay ka mid yihiin radians iyo trig trig, aqoonsiyada trig iyo qaababka saddexagalka, shaqooyinka qalloocan ee qalloocan, xaglo gaar ah, iyo wareegga unugyada, iwm. Kuwaas oo ku baahsan koorsooyinka kale ee sayniska iyo injineernimada
Haa, kani waa tirakoob laakiin tani way ka duwan tahay tan kale ee kor ku xusan in la qiimeeyo oo lagula taliyo illaa afar saacadood oo simistar ah waxaana loo wareejin karaa in ka badan 2,000 koleej ama jaamacado.
Waad dalban kartaa wareejinta deynta oo waqti iyo lacag ayaad ku keydin kartaa darajooyinka. Ku Mabaadi'da koorsada tirakoobka wuxuu leeyahay 11 cutub oo u kala baxa casharo kala duwan oo lagu bixiyo fiidiyowyo sidoo kale waxaa jira imtixaan tijaabo ah dhamaadka daraasaddaada koorsada.
Xaqiiqdii waxaad tahay nooca dareenka leh ee aad ku aqrinayso tan oo aad u xiisaynayso xisaabta. Dantaada u qaado heerka xiga adoo ka qayb qaadanaya koorsadan, Xisaab 101: Kuleejka Algebra, taas oo ah mid ka mid ah koorsooyinka xisaabta ee bilaashka ah ee dugsiga dhexe.
Koorsada waa la qiimeeyay oo waxaa lagugula taliyay saacadaha 3 simistarka waxaadna dalban kartaa wareejinta amaahda in ka badan 2,000 jaamacadood iyo koleejyo. Waxaad wax ka baran doontaa macallimiin khabiir ku ah xisaabta kuwaas oo ku bari doona aljabra sida ugu fudud ee suurtogalka ah sidoo kale waxaa jira kedis aad u qaadan karto si aad u tijaabiso aqoontaada.
Tani waxay ka kooban tahay laamo kala duwan oo xisaab ah sida xisaabta, aljabra, iyo joomatari inkasta oo ay ku barayaan habka ugu aasaasiga ah ee kor loogu qaado fahamka ardayda.
Ka waalid ahaan ilmihiisa uu ku dhacayo xisaabta, waxaad ku dhiirrigelin kartaa inay iska qoraan koorsadan, wax ka bartaan macallinka ugu sarreeya xisaabta, iyo helitaanka aqoon gaar ah mowduucyada xisaabta ee kala duwan.
Taas macnaheedu waxa weeye waxay awoodi karaan inay kor u qaadaan darajooyinkooda iyo xitaa inay isku dayaan imtixaannada la heli karo si loo arko sida ay u fiicnaadeen. Hada isqoro
Horay uga soco xisaabta ama ku qabso adiga oo iska diiwaangeliya koorsadan oo bixineysa fiidiyoowyo iyo qoraallo ku saabsan aljabra iyo xisaab aasaasi ah oo loogu talagalay ardayda dugsiga dhexe. Si fudud ayaad ula socon kartaa si aad u dhammeysato shaqada guriga ama aad wax ugu baratid imtixaan soo socda.
Koorsadu waxay leedahay 55 cutub oo leh casharro kala duwan oo mid kasta leh casharro fiidiyoow oo kala duwan iyo aragtiyo si ay kuu siiyaan khibrad waxbarasho oo xiiso leh. Halkan iska qor
Kuwani waa 11 koorsooyin xisaabeed oo bilaash ah oo loogu talagalay ardayda dugsiga dhexe si ay u qoraan oo ay u bilaabaan cusbooneysiinta aqoontooda xisaabta isla markiiba.
Tani waa da'da internetka waana wax iska caadi ah inaan uga faa'iideysano si buuxda barashada internetka ayaa ah mid ka mid ah siyaabaha badan ee looga faa'iideysto internetka. U oggolow ilmahaagu inuu ka faa'iideysto faa'iidooyinka internetka adoo ka caawinaya inay ka qayb qaataan mid ka mid ah 11 koorsooyinka xisaabta tooska ah ee bilaashka ah ee dugsiga dhexe.
Hadday tahay inaad wax u barato imtixaan ama shaqo guri oo dhammaystiran boostadan ayaa si weyn loogu taliyay waxayna kaa caawin doontaa safarkaaga. Waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad ku cusbooneysiiso xusuustaada aasaasiga ah xisaabta dugsiga sare waxayna kaa caawin doontaa ilmahaaga dugsiga dhexe inuu u diyaar garoobo dugsiga sare.
Ardayda dugsiga sare sidoo kale way iska qori karaan barnaamijka si ay u cusbooneysiiyaan xusuustooda mowduucyo kala duwan oo xisaab waxayna sidoo kale sii wadi karaan inay u soo bandhigaan walaalahooda ku dhibtoonaya mid ka mid ah koorsooyinka xisaabta ee halkan ku qoran.
21 Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay dhalinyarada 13-19
10ka Dugsi Sare ee ugu da'da weyn Kanada
9 Jaamacadaha ugu Fiican ee Maraykanka
15 Jaamacadaha ugu Qaalisan Qaarada Yurub Ardayda Caalamka
37 Koorsooyin Bilaash ah oo Koorsooyin ah oo leh Iskuxirayaashooda Codsiga
koorsooyin xisaabeed oo bilaash ah oo loogu talagalay dugsiga dhexe
Previous Post:Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee 13 Hillsdale College
Post Next:Shuruudaha Jaamacadda Victoria | Khidmadaha, Deeqaha waxbarasho, Barnaamijyada, Darajooyinka
Pingback: 25 Casharrada Barashada Kitaabka Quduuska ah ee Lacag La'aanta ah oo leh Su'aalo iyo Jawaabo PDF 2022
ii sheeg of comments daba-by email.
Isku day adeegga qorista qoraalka ee Writix si aad u hesho caawimo xirfadeed ee UK.
Ku soo biir Kooxahayada Deeqaha Caalamiga ah ee Cusub Halkan
Hel macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan barnaamij kasta oo waxbarasho oo socda oo la sheekayso ardayda caalamiga ah deeqda waxbarasho ee adduunka oo idil.
Ku soo biir Kooxda Telegram ee deeqaha waxbarasho ee caalamiga ah (Doodda karti u yeeshay)
Ku soo biirkeena Kooxda Caalamiga ah ee WhatsApp Group 2 (Doodda Awood uma lihid)
na raac on Twitter si aad u aragto qoraalkeena ugu dambeeyay ee ku saabsan fursadaha iyo deeqaha waxbarasho ee dibadda.